Carl Henry ONLINE! EBUWU eBook
Ahịa ụlọ ahịa na-enye ọtụtụ ohere ịme ego, ma ọ bụ naanị akụkụ ole na ole nke ụlọ ọrụ ahụ ga-ada ma ọ bụ kwe ka obi gị dị mma.
Echela na ị ga - azụta ya Ka ọ bụrụ na onye ọ bụla ị maara na - eme nke a, lee anya nke ọma ma rụọ ọrụ, ihe nkà gị bụ, ihe ị na - anụ ọkụ n'obi banyere, ihe na - eme gị onwe gị - ndị a bụ ihe ndị na - eme gị aga mgbe oge na-esi ike.
Ị nwere ike ịghọ onye ahia azụ nke nwere obere oge anya iji hụ na ị ga-akwụ ụgwọ, ị nwere ike ịbụ ogologo oge maka ịchọta ala na ịmepụta otu ụlọ kwa afọ nwere ike bụrụ akpa gị, ị nwere ike bụrụ ndị mmadụ ma ọ bụghị mma na ihe gbasara akụnụba ka ị na-agba mbọ ịhapụ gị n'ụlọnga nwere ike ịkwado gị nke ọma, ị nwere ike ịnwe ndidi maka ejighị n'aka ka ọnwa 6 wee hụ na ị ga-eme ka ị na-arahụ! Ya mere, ogologo ụlọ ọrụ na-ahapụ ma ọ bụ itinye ego na ụlọ ahịa na ogologo oge azụmahịa nwere ike inye gị àgwà ndụ nke na-atọ ụtọ.
Adịla na ụlọ ọrụ a ka ị mee ego n'ihi na ohere bụ na ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị na ihe ị na-eme, ị gaghị enye ya ihe kachasị mma, ị gaghị eme onwe gị ka i si n'àkwà bilie ma ọ bụrụ naanị ụra awa ole na ole iji dozie nsogbu dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahapụ ihe na-esere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe.
Ndụ na azụmahịa bụ njem, mgbe ị ruru ihe mgbaru ọsọ gị, ị ghaghị ịchọta ihe mgbaru ọsọ ọzọ - oge n'etiti ịmepụta ihe mgbaru ọsọ na iru ya bụ ihe anyị na-akpọ "Ndụ", ma ọ bụrụ na ịnweghị "Ndụ" gị, kedu ihe bụ isi?
Nye onwe gi onyinye kachasị mma n'ụwa - nweta ego site na ime ihe ị hụrụ n'anya na-eme - ọ ga-akwụsị ọrụ. Ọ na - aghọ 'Web' na otu nke i mepụtara n'onwe gị. Nọgidenụ na-emepụta ntaneti gị ruo mgbe ịchọtara nchịkọta na ụlọ ọrụ Ngwongwo ị na-enwe mmasị, ị nwere mmasị na ị ga-aghọ ọkachamara - mgbe ahụ ị ga-enwe mmeri na ọtụtụ ọkwa.
Ọ bụrụ na i chere na m nwere ike inyere gị aka ịga nke ọma n'ụzọ ọ bụla, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịbanye!
Akwụkwọ a bụ nke mbụ nke ọtụtụ ndị ga-elekwasị anya n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ntanetị UK ma biko lelee akwụkwọ ọhụrụ m.